सुन्दर नगर निर्माणका लागि काम गर्दैछु : नगर प्रमुख ऐर | Kattwal.com
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुगिसकेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रबेश गरेसंगै संबिधानले परिकल्पनना गरेको तीन वटै तहको निर्वाचन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित कंचनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरले नगर प्रमुखको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । यो अवधिसम्ममा नगरपालिकाले के कस्ता विकास निर्माणका कामहरु ग¥यो, हालसम्म भएका प्रगति र आगामी योजनाका विषयमा नगरप्रमुख दिल बहादुर ऐरसंग कट्वाल अनलाईनका लागि टंक कुँवरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
१.शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको हालको अवस्था के छ ?
नगरप्रमुख : शुक्लाफाँटा नगरपालिका झलारीको अवस्था हेर्दा हामीले जनताका अपेक्षा आकांक्षालाई पूरा गर्न धेरै मेहनतका साथ काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । गतिसिलताका साथ विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ । सडक भौतिक पूर्वाधार,पूल निर्माणलाई तीब्र गतिमा अगाडी बढाईरहेका छौँ । सुशासन, कानुनी पाटो,पारदर्शिताका साथ सुचनाको हकलाई सम्बद्र्धन गर्दै अगाडि बढेका छौँ । यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधिहरु खटिरहेको अवस्था छ ।
नगरप्रमुख : खास गरी २० वर्ष पछिको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग जनताका धेरै गुनासा,आसा,अपेक्षा त रहने नै भए । त्यसैमा भनिएको छ कि स्थानीय सरकारलाई सिंहदरवारको अधिकार सुम्पेको छ । यस्तो अधिकार सुम्पीसके पछि हामी जनप्रतिनिधिहरु समक्ष जनताको आशा,अपेक्षा प्रवल रहेको छ ।
हामी निर्वाचित भएको १५ औँ महिना लाग्दै छ । अहिले जनताका आधारभूत कुराहरु स्वास्थ्य,खानेपानी,सडक,यातायातलाई व्यवस्थित गर्नतिर अघि बढिरहेका छौँ । जनताले सवै काम एकै चोटी भैदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ तर यी कुरा एकैचोटी भन्दा पनि विस्तारै हुने कुरा भएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको छ ।
हामीलाई चुनौति पनि छ । यहाँ जंगली हात्तीले आका्रन्त बनाएको छ । साढे सात हजार जनतालाई क्षति पु¥याएको छ । यहाँ दैवी प्रकोप पनि उत्तिकै छ । यी यावत कुराहरुलाई समाधान गर्न तिर अघि बढिरहेका छौँ । प्रारम्भमा समस्या समाधान गर्न सकिदैन । यो पाँच वर्षभित्र जनताका अत्यावश्यक अपेक्षाहरु पुरा गरेर छोड्ने नै छौँ ।
नगरप्रमुख : म यो नगरपालिकामा निर्वाचित भैसकेपछि लक्षित वर्गका कुराहरु कानुन तह अगाडि बढाएका छौँ । सामुदायिक छाडा पशुको व्यवस्थापनका लागि डी.पी.आर. तयार गरेर योजना अगाडि बढाएका छौँ । नगरलाई समृद्ध बनाउन लागि परेका छौँ । नगरको मुलधारमा आउन नसकेका लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।
नगरको गौरवका योजनाहरु प्रदेश सरकार,संघीय सरकारसंग उच्च महत्वका साथ बजेट विनियोजित गराउँने कुरामा अगाडि बढेका छौँ । भ्रष्टाचारलाई सुन्य सहनसिलतामा ल्याएर कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दै यहाँका १२ वटा वडाकार्यालय स्थापना गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराहरुमा अग्रसर भएर लागेका छौँ । सिंहदरवारको अधिकार वडा कार्यालयहरुमा समेत कार्यान्वयन भैरहेको छ ।
नगरलाई समृद्ध बनाउन वडा कार्यालयहरुमा ठूला बजेटहरु विनियोजन गरेका छौँ । जनताका घरदैलोमा गई प्रतिबद्धता गरेका कुराहरु लाई कार्यान्वयनको चरणमा लिने कोसिस गरिरहेको छु । यो नगरपालिकालाई सुन्दर समृद्ध नमुना नगरपालिका बनाउने योजना अनुरुप मैले काम गरिरहेको छु ।
नगरप्रमुख : हाम्रो शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा नदी तटबन्द भौतिक पूर्वाधार निर्माण,शिक्षा खानेपानी,यातायात व्यवस्थित गर्न डी.पी.आर. तयार गरेका छौँ । १२ वटै वडा संग छुनेगरी शुक्लाफाँटा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छौँ । प्रदेश,संघीय सरकारलाई यस नगरपालिकामा हुने आवश्यक योजना निर्माण गरी दिने तयारीमा जुटेका छौ । सुन्दर नगर सुन्दर सहर निर्माणका लागि आगामी योजना रहेका छन् । सोही अनुरुप कामको थालनी पनि गरिसकेका छौँ ।
सुन्दर नगर,सुन्दर सहर निर्माणमा एउटा नगरप्रमुख,वडाअध्यक्ष,सदस्यहरुले गरेर मात्र सम्भव हुदैन त्यसका लागि सम्पूर्ण नगरबासीको हातेमालोको आवश्यकता पर्छ । तपाईहरुका बिचमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता ईमान्दारीतासाथ अक्षरसः कार्यान्वयनमा लग्दै जाने छौँ अहिले जनताको भावना बमोजिम उच्च प्राथमिकताका साथ अत्यावश्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ सोही अनुरुप योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।
त्यसैले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले गरेका योजनालाई कार्यान्वयनको चरणसम्म पु¥याउन तपाईहरुको पनि आवश्यकता छ । यसका लागि सम्पूर्ण नगरबासीले हातेमालो गर्दे अघि बढिदिनुहोला भन्न चाहन्छु ।
आजबाट एसईई सुरुः ४ लाख ७५ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
टीकापुर घटनाको चार वर्ष : सामाजिक सद्भाव साझा अपेक्षा